Best Augur mgbanwe
Best Augur ọnụego mgbanwe ọnụego taa site na netwọk ego ego. Ebe kachasị mma ịzụta ma ọ bụ ire Augur taa.
Best Buy price Augur $ 12.36 REP/KRW ProBit Exchange
Ahịa ahia kacha mma Augur $ 14.8854 REP/BTC Abucoins
Augur egobere ego ego maka ahia azụmaahịa ọ bụla ma dabere na nguzosi ike nke ọkọnọ na ịrịọ. Na mgbanwe ego ego ọ bụla, nguzozi nke ndi na-azu ahia na ndi na ere ahia nke Augur dị iche. Enwere ike ịchọta ọnụego Augur site na nyochawa ọnụego mgbanwe nke mgbanwe ego ego ego niile ma họrọ nke kachasị mma. Anyị Best Augur mgbanwe peeji na-ahọrọ azụmahịa azụmaahịa na mgbanwe ego niile nke ụwa ma gosipụta nke ugbu a kachasị mma. Augur ịzụrụ ma ree ọnụego.
Best Augur obere akpa
Ka 28, 2020 Kachasị mma ịzụta Augur na Ka 28, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma Augur na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Mpempe akwụkwọ Crypto bụ mmemme dị mgbagwoju anya nke echekwara ego ego. A na-ejikwa obere akpa ahụ maka ịkwụ ụgwọ, maka mbufe nke mkpụrụ ego crypto. Mpempe akwụkwọ ego crypto nwere oke nke: ntụkwasị obi, ịdị mfe, nchekwa. Mpempe akwụkwọ kachasị mma Augur kwesịrị ịnwe ntụkwasị obi kacha mma na njikwa nchekwa n'echiche anyị. A na-enyocha mgbanwe crypto niile na oke olu nke Augur. Dabere na nsonaazụ ahụ, anyị na-ahọrọ ọnụego kachasị mma site na azụmaahịa emechara.
Ụlọ ahịa Augur kacha mma
Ọ bụ ihe ezi uche dị na iche na ọ bụrụ na nso nso a na mgbanwe e nwere ọnụahịa zụrụ nke Augur, mgbe ahụ ọ bara uru ịchọ ọnụego mgbanwe kacha mma na mgbanwe ego ego a. Augur ọnụego kachasị mma maka taa 28/05/2020 - gosipụtara n'ụdị tebụl nke azụmahịa azụmaahịa niile maka taa. Ire kachasị ere na ịzụta Augur maka 28/05/2020 anyị debere ebe dị iche na ibe ahụ. Ọrụ anyị "ọnụahịa Kachasị mma Augur nke taa 28/05/2020" na-enye gị ohere inyocha ọnụego niile kachasị mma n'ụwa niile na ntanetị.
BTC ETH USDT USD KRW IDR XRP UQC EUR AUD PLN INR Ọzọ ...
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa Augur nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
Kraken REP/EUR $ 12.59 $ 58 634 -
Kraken REP/USD $ 12.52 $ 44 421 -
Kraken REP/BTC $ 12.54 $ 18 837 -
Kraken REP/ETH $ 12.66 $ 11 838 -
Omgfin REP/BTC $ 12.50 $ 1 475 370 -
Omgfin REP/ETH $ 12.56 $ 756 207 -
Omgfin REP/USDT $ 12.60 $ 122 648 -
Omgfin REP/UQC $ 12.66 $ 60 413 -
Poloniex REP/USDT $ 12.61 $ 12 316 -
Poloniex REP/BTC $ 12.51 $ 8 914 -
Poloniex REP/ETH $ 12.63 $ 2 635 -
Polyx REP/ETH $ 12.39 $ 10 655 -
Polyx REP/BTC $ 12.38 $ 10 501 -
Polyx REP/USD $ 12.36 $ 10 380 -
Bitfinex REP/BTC $ 12.85 $ 164 -
Bitfinex REP/ETH $ 12.55 $ 15 -
Bitfinex REP/USD $ 12.46 $ 7 -
HitBTC REP/BTC $ 12.46 $ 425 674 -
HitBTC REP/USDT $ 12.51 $ 140 158 -
HitBTC REP/ETH $ 12.56 $ 49 081 -
Bibox REP/USDT $ 12.75 $ 313 861 -
Bibox REP/BTC $ 12.62 $ 244 145 -
Bibox REP/ETH $ 12.54 $ 199 528 -
Bitsdaq REP/BTC $ 12.55 $ 7 037 -
Bitsdaq REP/ETH $ 12.61 $ 2 081 -
LATOKEN REP/ETH $ 12.62 $ 2 425 -
LATOKEN REP/BTC $ 12.68 $ 788 -
ProBit Exchange REP/USDT $ 12.60 $ 26 407 -
ProBit Exchange REP/KRW $ 12.36 $ 19 362 -
CoinEx REP/USDT $ 12.64 $ 53 768 -
CoinEx REP/BTC $ 12.62 $ 41 548 -
Bittrex REP/BTC $ 12.61 $ 7 424 -
Bittrex REP/ETH $ 12.62 $ 2 429 -
BitMart REP/ETH $ 12.69 $ 1 443 146 -
BitMart REP/BTC $ 12.64 $ 650 059 -
VCC Exchange REP/BTC $ 12.56 $ 17 415 -
VCC Exchange REP/ETH $ 12.41 $ 630 -
Coinbase Pro REP/USD $ 12.54 $ 654 661 -
Coinbase Pro REP/BTC $ 12.63 $ 106 976 -
Gate.io REP/ETH $ 12.74 $ 7 -
Switcheo Network REP/ETH $ 12.87 - -
CoinField REP/XRP $ 12.64 $ 7 558 -
CROSS exchange REP/BTC $ 12.55 $ 19 168 -
Uniswap REP/ETH $ 12.69 $ 8 266 -
Rekeningku.com REP/IDR $ 12.75 $ 35 056 -
Kyber Network REP/ETH $ 12.83 $ 20 497 -
Folgory REP/BTC $ 12.53 $ 195 686 -
VinDAX REP/ETH $ 13.30 $ 1 522 207 -
Independent Reserve REP/AUD $ 12.50 - -
Hanbitco REP/BTC $ 12.56 $ 87 297 -
CoinTiger REP/BTC $ 12.64 $ 10 328 -
Bithumb REP/KRW $ 12.39 $ 280 661 -
Crex24 REP/BTC $ 12.50 $ 2 -
BitBay REP/PLN $ 12.75 $ 876 -
Abucoins REP/BTC $ 14.89 - -
Bitbns REP/INR $ 12.63 $ 230 -
Indodax REP/IDR $ 12.65 $ 1 145 -
Exrates REP/BTC $ 12.81 $ 548 430 -
CoinBene REP/BTC $ 12.57 $ 227 453 -
WazirX REP/USDT $ 12.71 $ 450 -
Binance REP/BTC $ 12.54 $ 353 216 -
A na-edobe ọnụego ịzụta kacha mma Augur mgbe ịzụrụ ego na-abụghị ọkọlọtọ ma ọ bụ ego ego ndị ọzọ. Maka ụdị ego enwere ike Augur gosipụta nke dị ọnụ ala karịa ego azụtara kacha mma. N'aka nri nke ọnụahịa ire ahịa ego ego kachasị mma bụ njikọ nke onye na-ere ahịa. Ọ bụ n'ọnọdụ mgbanwe a ka e rere Augur na ọnụahịa kachasị mma. A na-etoliteghị ọnụahịa kachasị mma Augur mgbe ana erere dollar. Maka ego ọzọ ma ọ bụ ego ego, ọnụahịa ere nwere ike ịba uru karịa.
Ọ dị mkpa ịmata ụdị mkpụrụ ego Augur mgbe azụtara ego kachasị mma. Anyị na-egosipụta ozi a n'aka nri nke ọnụego ego ego kacha mma. Mgbanwe kachasị mma maka ịzụ ma ọ bụ ire Augur edepụtara na tebụl dị na peeji a. A na-ahazi ngosipụta mgbanwe site na ọnụego mgbanwe kacha mma maka ire na ịzụ Augur. Egosipụtara ọnụego a na dọla US. Jiri nyo nke ego dị iche iche dị na tebụl nke mgbanwe ego ego kachasị mma iji hụ Augur maka ego achọrọ ma ọ bụ ego ego chọrọ.